Ama-Turnips athosiwe | Ukupheka Kwekhishi
Loreto | | Okufakiwe Okushisayo, General, Side Dish Ungadliwa
Sijwayele udle amachips, okuthi, njengoba igama liphakamisa, zenziwe ngamazambane. Namuhla ngikulethela okunye okwahlukahlukene kwalesi sidlo, itheniphu ethosiwe. Uma sekuphelile, zethulwa ngendlela efanayo namazambane.
Kepha njengenjwayelo siyothenga bese sihlela isikhathi.
Isikhathi sokulungiselela: I-20-30 minutos
4 itheniphu emnyama noma emhlophe
Siqala ngakho ukunwetshwa kwalesi sibiliboco esilula. Njengoba kukhonjisiwe kwizithako, kungaba mhlophe noma kumnyama, kimi kumnyama ngoba ngiyithanda kangcono. Futhi phawula ukuthi ubuningi nabo buhlobene, ngoba buzobe buhlobene nokuthi busetshenziswa yini njengesidakamizwa noma njengesiqalo.
Manje sihlanza futhi sisika i-turnips ngendlela yamazambane othosiwe, Ilula, kepha uma unomshini nayo ingasetshenziswa.
Uma usikiwe Sibadlulisa ngofulawa bese kamuva sihamba ngesihlungo ukuze bakhiphe ufulawa oweqile, khumbula ukuthi kufanele usawoti itheniphu.
Manje sizifaka kwifry noma epanini, Kuzimele, kepha ngincoma i-fryer, ilula futhi ayimunci uwoyela omningi.
Lapho esegolide, sizisusa ephepheni lasekhishini, ukumunca uwoyela, engeza usawoti omncane futhi olungele ukudliwa.
Njengoba ubona Kulula ukwenza futhi kuyindlela ehlukile yokwethula eminye imifino kwabancane yendlu, ngoba ukunambitheka akuhluka kakhulu.
Ekugcineni, phawula lokho ingenziwa isiyingi futhi mncane ukuze abukeke njengama-chips, lokho kuzohlobene nokuthi siwathanda kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Abangane » Okufakiwe Okushisayo » Ama-turnips athosiwe